Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta: Manisa ny andro sisa ireo minisitra
Governemanta: Manisa ny andro sisa ireo minisitra
Toa ny firenena tsy misy mpitondra intsony isika eto Madagasikara ankehitriny. Teo aloha teo dia tsy hay tenenina intsony ny fitiavan’ny minisitra tsirairay avy hiseho amin’ny fahitalavitra samy hafa. Lazaina daholo izay tratrin’ny vava ka na zavatra tsy mbola masaka akory aza dia isehosehoana. Hatramin’ny asa tanamaro avy no isehosehoan’izy ireo. Làlana tsy ampy iray kilaometatra avy no anaovana fitokanana etsy sy eroa. Amin’izany fotoana izany dia milaza fa “miasa ny governemanta” hono.
Teo aloha teo dia feno ny fiarakodian’ny minisitra ireny mivezivezy eran’ny tanàna. Tsy hay tenenina intsony ny tsy fanarahan-dalàna ataon’izy ireo fa mitsofotsofoka amin’ny làlana tsy azo ifanenana.
Mahakasika ny fivorian’ny governemanta tamin’ny alatsinainy faha 23 aprily 2018, dia tsy nisy zavatra tapaka tao na kely aza ka tsy nisy nolazaina tamin’ny vahoaka toa ny mahazatra. Tsy nisy ny fampitam-baovao nataon’izy ireo tamin’ny mpanao gazety tamin’izany. Efa toa olona miandry fionganana avokoa izy rehetra ireo, ary efa tsy matoky tena koa. Misy aza ny feo mandeha fa efa misy ny te-hiala mialoha mba tsy ho tra-parany eo. Raha ny any amin’ny ministera isan-karazany indray dia tsy misy na inona na inona intsony ataon’ireo mpiasam-panjakana ireny fa mitango lalitra sisa. Tsy hita avokoa ny lehibe amin’ireny toeram-piasana ireny satria tsy tazana hatramin’ny minisitra. Tena tsy misy asa mandeha intsony na kely aza amin’izao fotoana izao. Ny mpiasa tsy misy mibaiko, ny olona mibaiko efa samy mangoron’entana sy mitondra izay azony entina mody daholo satria efa tsy misy matoky tena intsony fa mbola hitohy izao fanjakana izao.
Manisa andro ankehitriny ny minisitra amin’ny hipetrahany amin’ny toerany. Ny tolona miha-mahazo aina manerana an’i Madagasikara. Tsy mitsahatra ny filazana etsy sy eroa ataon’ny sokajin’olona sy fikambanana maro amin’ny fangataham-pialan’ingahy Hery Rajaonarimampianina.
Ambatofinandrahana : Rahoviana ny fanamboarana ny RN-35T ?
Kandidà Giscard Andriano : Manameloka azy ny vondron’ireo kandidà ao Manakara
Natokana ho an’ny besandry ny fakana taxi-be hariva
Nepatraiky Rakotomamonjy : Mampitolagaga ny vola laniany
INTY SY NDAY : Depiote ho mpanangan-tanana
TIM TANA IV : Lehiben’ny kolikoly ny kandidà Ramboasalama ?
Fihoaram-pefy nandritra ny fampielezan-kevitra : Nionona tamin’ny fampitandremana ny CENI
Manakara : Tsy manao afa-tsy ny mizara vola ny kandidà IRD
Fanampenan-dalana ao Ambohijanahary : Voahitsakitsaka ny zon’olombelona